Tudomus inopa nzira nyowani yekutenga nekutengesa dzimba | ECommerce nhau
Tudomus inopa nzira nyowani yekutenga nekutengesa dzimba
Tudomus ndiyo portal nyowani inozivikanwa mukutenga, kutengesa uye kubhadharisa dzimba, kushambadzira kwacho kunoitwa nevashandisi vayo mukutsinhana nekuparadzirwa kwemakomisheni akagadzirwa. Zvisinei, zvinopesana nezvingaratidzika kunge zvakadaro, Tudomus haisi imwe nzvimbo yekutengesa zvivakwa. Icho chirongwa chitsva, zano uye 100% capital yeSpain, yakavakirwa pamamodeli e mubatanidzwa wehupfumi.
Tudomus ane simba online kushambadzira chishandiso izvo hazvisi chete zvinosangana nezvinodiwa nevavanotsvaga tenga, tengesa kana roja imba kuSpain, asi zvakare iri nzira yakanaka kwazvo ye kuzvishandira, sezvo ichigovera iyo purofiti inogadzirwa mune yega yega yakavharwa mashandiro kuburikidza neiyo portal pakati pevashandisi vanobatsirana mukutengesa kwayo.
1 Mashandiro anoita Tudomus
2 Inowanikwa muSpain chete, zvirinani izvozvi
3 Imwezve zano rekusimudzira kuzvishandira pamwe nehupfumi hwakabatana
Mashandiro anoita Tudomus
Iko kushanda kweTudomus kuri nyore kwazvo. Imba yega yega inoiswa kuTudomus inopihwa akateedzana mibairo yemhando yega yega yekubatana iyo mushandisi yaanoda kupa, uye mushandisi anogona kutora chikamu nekukoka vashandisi vatsva kujoina network, vachikurudzira zvivakwa kune vangangozvitenga kana kutaridza dzimba nzvimbo yavo (real estate freelance).
Iko kushanda kweanoverengeka eaya mabasa panguva imwechete kunounganidza mibairo iyi, uye kune vazhinji vashandisi iwe unogona kuve sosi yemari inochengetedza nemari 0 yekudyara.
Iyo purojekiti, inoshamisa tekinoroji, inovimba pasocial network kuvaka yakakura yekutengesa network iyo inofambisa kusvika kwechigadzirwa kusvika kumagumo mutengi.
Inowanikwa muSpain chete, zvirinani izvozvi
Parizvino, Tudomus inongova nedzimba kuSpain, inoshandurwa mumitauro miviri uye inowanikwa kune vashandisi veEuropean, vachitarisira munguva pfupi iri kutevera kupinzawo dzimba kubva kune dzimwe nyika dzeEurope.
Imwezve zano rekusimudzira kuzvishandira pamwe nehupfumi hwakabatana
Tudomus akatanga basa rayo muna Ndira 2015 uye atove ne 1200 yekuda dzimba (kunyanya dzimba muMadrid neBarcelona) uye akagovera € 20.000 mumubairo kune vashandisi vayo. Iyi puratifomu yakaumbwa mukati memakambani ehupfumi hwekudyidzana, hurongwa hwehupfumi umo masevhisi akagovaniswa kuburikidza nemapuratifomu edhijitari.
Pfungwa yaTudomus ndeye kupa mukana kune iyo real estate bhizinesi kune avo vese vanoda kutora chikamu mune real estate bhizinesi. Munguva pfupi chikuva chinenge chiine makosi ekudzidzira uye zvese zvinodiwa maturusi ekuita basa rekutengesa zvivakwa uye uve mucherechedzo webasa uye mhando, kune vatengi venyika nevekunze vanoda kutenga kana kuroja imba.
Tudomus ine chikamu chakakumikidzwa kune zvinoitwa nevashandisi vayo, nharaunda, uko nhau dzechikamu dzinogovaniswa (Mari dzekutenga imba, Ndeupi mutengo wekutengesa wemba yangu, ... inokwanisa nguva dzese ramba uchiziva zviri kuitika nenhengo dzenharaunda yetudomus, mibairo, kubatana kutsva, nhau kubva kuchikamu, ...
Tichifunga nezvekudyidzana kwaTudomus, mutengesi wemba, uyo anoshambadzira zvivakwa zvavo mahara, anozvipira kubhadhara komisheni inongodiwa chete kana paine kutengesa. Kuzvipira uku hakusi kwega, ndiko kuti, mutengesi anogona kushambadzira dzimba dzavo pane mamwe mapuratifomu echinyakare edzimba. Kana yango gamuchira kupihwa kubva kumutengi, uye kutengesa kana kubhadharisa zvikaitwa zviri pamutemo, tudomus inoparadzira komisheni pakati pevashandisi vakatora chikamu mukutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Tudomus inopa nzira nyowani yekutenga nekutengesa dzimba
kutengesa zvivakwa akadaro
Yakanga iri nguva yekuwana blog yakadai kwaunogona kugovana nhau kubva kuchikamu, uye tarisa zvandaitsvaga uye hapana, saka enda kumberi vakomana uye rombo rakanaka!
Pindura kutengesa kwepfuma
Maria Jesu Muňiz akadaro
Ndinoda nhamba yekufona kuti ndiunganidze rumwe ruzivo nezve ino peji. Ndatenda. Shuwiro yakanakisa
Pindura kuna Maria Jesu Muňiz
Mhoroi, ndinotarisira kuti zvakasarudzika uye zvine hunhu zvigadzirwa zvinogamuchirwa.
Yakanaka kwazvo pakuvandudza
Iyo itsva Activate ine Google webhusaiti yave kushanda
Mhedziso ye "European Mobile Chidzidzo cheMotokari uye Vashambadzi Vezvekutengesa"